Esophageal Atresia (အစာရေမြို ပိတ်တယ် ) - Hello Sayarwon
Esophageal Atresia (အစာရေမြို ပိတ်တယ် )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Esophageal Atresia (အစာရေမြို ပိတ်တယ် )
ရေးသားသူ Khine Phoo Ngon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
Esophageal Atresia (အစာရေမြို ပိတ်တယ် ) ကဘာလဲ။
အစာရေမြို ပိတ်တယ်ဆိုတာ ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း(ကြီးထွား၊ ဖွံ့ဖြိုးချိန်)မှာ အစာရေမြိုက ပိတ်သွားတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပါးစပ်နဲ့ အစာအိမ်ကို ဆက်ထားပေးတဲ့ ပြွန်ဖြစ်သွားရမယ့်အစား အစာရေမြိုဟာ မဆက်ဘဲသက်သက်စီ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု အဖြစ်ကွဲသွားပါတယ်။ အဲလိုအခြေအနေတွေဟာ ကိုယ်ဝန် လေးပတ်လောက်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
အစာရေမြို ပိတ်တဲ့ အမျိုးအစား ၅မျိုးလောက်ရှိပါတယ်။ အစာရေမြိုမှ ပုံမှန်သွယ်ဆက်လေ့မရှိသော နေရာနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ပြွန်နဲ့ အတူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
A အမျိုးအစား- အစာရေမြိုမှ ပုံမှန်သွယ်ဆက်လေ့မရှိသော နေရာနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ပြွန် မဖြစ်ပေါ်ဘဲ အစာရေမြို ပိတ်ခြင်း။ (၁၀%)
B အမျိုးအစား- အပေါ်ဘက် အစာရေမြို အပိုင်းသို့ ပြန်ဆက်သွားတဲ့ ပြွန်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အစာရေမြို ပိတ်ခြင်း။
C အမျိုးအစား- အောက်ဘက် အစာရေမြို အပိုင်းသို့ ပြန်ဆက်သွားတဲ့ ပြွန်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အစာရေမြို ပိတ်ခြင်း။
D အမျိုးအစား- အစာရေမြို အပေါ်ဘက်ရော၊ အောက်ဘက်ရောသို့ ပြန်ဆက်သွားတဲ့ ပြွန်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အစာရေမြို ပိတ်ခြင်း။
E အမျိုးအစား- ပုံမမှန်သော ပြွန်ဖြစ်ပေါ်သော်လည်း အစာရေမြို ပိတ်ဆို့မှုမရှိခြင်း။( ၄%)
ဒီလိုအခြေအနေတွေဟာ မွေးကတည်းက နှလုံးပုံမမှန်ခြင်း၊ ကျောရိုးပုံမမှန်ခြင်း၊ စအိုပေါက်ပိတ်နေခြင်း၊ နှင့် ကျောက်ကပ် ချို့ယွင်းချက် စတဲ့ အခြား မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေနဲ့ အတူတူ ပါလာတတ်ပါတယ်။
Esophageal Atresia (အစာရေမြို ပိတ်တယ် ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အစာရေမြို ပိတ်တဲ့ ပြသနာအမျိုးအစားတွေက အစာချေလမ်းကြောင်း မှာ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး အရှင်မွေးဖွားသူ အယောက်၃၅၀၀ မှာ ၁ယောက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ မိန်းကလေးတွေ ထက်စာရင် ယောက်ျားလေးတွေမှာ နှစ်ဆလောက်ပို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Esophageal Atresia (အစာရေမြို ပိတ်တယ် ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ အစာရေမြိုပိတ်တဲ့ရောဂါ လက္ခဏာတွေက အစာ ကျွေးခြင်း၊ ကလေး အသက်ရှုခြင်း စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတက်ပါတယ်။
နှာခေါင်း(သို့) ပါးစပ်မှ တံတွေး(သို့) အပြစ်အချွဲတွေ အလွန်အကျွံထွက်နေခြင်း
အစာရေမြိုအတွင်းသို့ အက်ဆစ်များ ပြန်တက်လာခြင်း။
အပေါ်မှာ ဖော်မပြထားတဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ လည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါ လက္ခဏာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိလိုပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ရပါမယ်။
ဒီလိုရောဂါ အခြေအနေဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ဖြစ်လာတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် မမွေးခင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မှာ ပုံမမှန်တာတွေရှိ၊ မရှိ သိရှိရအောင် စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကလေးမှာ အထက်ပါ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် (သို့)သိလိုတဲ့ အချက်တွေရှိနေရင် တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံသင့်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ဟာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုချင်း မတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်အခြေအနေအတွက် ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သေချာသိနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြဲတမ်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Esophageal Atresia (အစာရေမြို ပိတ်တယ် ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အစာရေမြိုပိတ်တယ်ဆိုတာ ဟာ ကလေးလေးမမွေးခင်ကတည်းက ဖြစ်တဲ့( မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ အခြားအကြောင်းအရာတွေ မရှိပေမယ့် ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ မျိုးရိုးဗီဇက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပါ ဝင်နေပါတယ်။
မျိုးရိုးဗီဇ ပုံမမှန်ဖြစ်နေခြင်း က အစာရေမြိုကို မဖွံ့ဖြိုးအောင် တားနိုင်ပါတယ်။ အစာရေမြိုရဲ့ နံရံက လေပြွန်နားသို့ရောက်အောင် အရှေ့အောက်နားကို ဆွဲချခံရပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အစာရေမြိုက ပုံမှန် ပါးစပ်နဲ့ ဆက်ရမယ့်အစား ပိတ်နေတဲ့ ပြွန်တစ်ခု ဖြစ်သွားရပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Esophageal Atresia (အစာရေမြို ပိတ်တယ် ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဒီရောဂါဟာ မိဘမှ ကလေးဆီသို့ ဖြန့်ဝေနေတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားတော့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုရောဂါ ဖြစ်လာရမှုဟာ မျိုးရိုးဗီဇ နောက်ခံ အခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆေးပညာ ခန့်မှန်းချက်တွေတော့ရှိပါတယ်။ အစာရေမြိုပိတ်ခြင်းရဲ့ မျိုးရိုး ဗီဇ နဲ့ ပြန်ဖြစ်နိုင်ချေတွေကတော့
အစာရေမြို ပိတ်ခြင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင် ကုသပြီး အသက်ရှင်သွားတဲ့ သူမှာ တူညီတဲ့ ရောဂါရှိတဲ့ သားသမီးမွေးဖွားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မောင်နှမ အရင်းထဲတွင် အစာရေမြို ပိတ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ဖူးတာမျိုးတွေ့ရှိရနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုတစ်ခုမှာ ကလေး ၃ယောက်အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးစောစော မွေးခြင်းကလည်း အစာရေမြို ပိတ်ခြင်းကို ပို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Esophageal Atresia (အစာရေမြို ပိတ်တယ် ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကိုယ်ဝန် ဒုတိယ သုံးလမရောက်ခင်အထိ အစာရေမြိုပိတ်ခြင်းရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေက မထင်ရှားပါဘူး။ တစ်ချို့ အခြေအနေတွေမှာ ကလေးမွေးပြီး ၂၆ ရက်မှ ၄နှစ်လောက်မှ ရောဂါ အမည်သတ်မှတ်နိုင်တာမျိုးထိ ရောဂါ အမည်သတ်မှတ် တာနောက်ကျနိုင်ပါတယ်။ အာထရာဆောင်း၊ MRI ကဲ့သို့သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း စစ်ဆေးတဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေကို ကလေးရဲ့ ပုံမမှန်ဖြစ်စဉ်တွေကို သိနိုင်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
Esophageal Atresia (အစာရေမြို ပိတ်တယ် ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်းမှာပဲ အစာရေမြိုပိတ်ခြင်းရှိနေကြောင်း သိရှိပါက ဆရာဝန်က သင့်ကို ကလေးလေး မွေးပြီးတဲ့ အချိန်ထိ စောင့်ဖို့ အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ အစာရေမြိုပိတ်တာကို တော်တော်ကြီး သံသယရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း ချက်ချင်း ကုသမ၊စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်အောင်လို့ tertiary care –centre မှာ မွေးဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ကလေးလေးမွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ မိခင် အနေနဲ့ ကလေးက နေ့စေ့၊လစေ့ ဟုတ်၊မဟုတ်၊ ကလေးရဲ့ အလေးချိန်၊ အဆုတ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ကောင်း၊မကောင်း ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆွေးနွေး ပြီး သင့်ကလေးအတွက် ခွဲစိတ်ကုသသင့်၊ မသင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကလေးမှာ ခွဲစိတ်ကုသပြီးရင် ပြန်ကောင်းလာနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က ခွဲစိတ်ပြီး ကလေးရဲ့ အစာလမ်းကြောင်းကို ပြန်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစာရေမြို အစိတ်အပိုင်းတွေကြားက အကွာအဝေးက အရမ်းဝေးနေရင် ဒီ ခွဲစိတ်ပြီးဆက်တဲ့ နည်းလမ်းက အသုံးပြုဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်သုံးဆေးနည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ?
အောက်ပါ အချက်အလက်တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကလေးမွေးဖွားရာနိုင်ဖို့ အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါ။
မွေးပြီးပြီးချင်းမှာ ကလေးအတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေ အတွက် ချက်ချင်း စစ်ဆေးရပါမယ်။
VACTERL(vertebral, anal, cardiac, tracheal, esophageal, renal, limb) လို့ခေါ်တဲ့ sonographic စစ်ဆေးချက်မှာ ကျောရိုး၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်၊ အရိုး၊ နဲ့ ချက်ကြိုးနဲ့ပတ်သတ်တာတွေကို စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးအတွက်နှလုံး ပုံမမှန်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်ချေများရင် echocardiography ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးမမွေးခင် စောစောစီးစီး စစ်ဆေးပြီး ရောဂါ အမည်တပ်နိုင်ခြင်းက ဖြစ်နိုင်တဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေ အတွက် ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ၊ ရှာဖွေ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်စေမှာပါ။
Barnewolt CE. Congenital abnormalities of the gastrointestinal tract. SeminRoentgenol 2004. Medical program content.Accessed December 4, 2016.
Holder Tm, Cloud Dt, Lewis Je Jr, Pilling Gp 4th. Esophageal Atresia And Tracheoesophageal Fistula. A Survey Of Its Members By The Surgical Section Of The American Academy Of Pediatrics. Pediatrics 1964.accessed December 4, 2016.
Fetology-Diagnosis-and-Management-of-the-Fetal-Patient. Download version Chapter 41 page 268. Accessed December 4, 2016.
Lieberman BRS Embryology 5th. Download version page 117.Accessed December 4, 2016.
Esophageal Atresia Symptoms & Causes. http://www.childrenshospital.org/conditions-and-treatments/conditions/esophageal-atresia/symptoms-and-causes. Accessed December 4, 2016.
Esophageal Atresia With or Without Tracheoesophageal Fistula. http://emedicine.medscape.com/article/935858-overview.Accessed December 4, 2016.
Esophageal atresia. https://medlineplus.gov/ency/article/000961.htm. Accessed December 4, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018
Cardiac Tumor (နှလုံးအကျိတ်)
Second Degree Heart Block (ဒုတိယအဆင့် နှလုံးပိတ်ဆို့ခြင်း)
Serotonin syndrome (ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု)
Crooked Teeth (သွားမညီညာဖြစ် ခြင်း)
Cholera – Vibrio Cholerae Infection (ကာလဝမ်းရောဂါ)
Retinal Artery Occlusion (မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်း)